Na-akpaghị aka | Zeevou
Zeevou bụ ụzọ kachasị mma iji rụọ ọrụ ile ọbịa gị. Naanị jigide ihe onwunwe gị na sistemụ anyị, setịpụ ọnụego gị, ị ga-agakwa!
Anyị na-enye uru dabara maka mkpa gị n'ọkwa ọ bụla. Onye njikwa anyị na-arụ ọrụ nwere njikọ 2 zuru ezu API iji mekọrịta ọnụego gị na nnweta gị, n'oge, ihe karịrị 200 ọwa (OTAs na saịtị edepụtara). Oge ọ bụla ntinye akwụkwọ na weebụsaịtị ọ bụla ejikọtara, a na-ebubata ya na akpaghị aka. Ihe omuma nke ndi obia, onu ahia ha na ihe omuma ndi ozo banyere ha na ebe nchekwa data anyi.
Ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ
Ọbụghị naanị nke a: usoro nkwenye anyị pụrụ iche nke usoro 5 na-ahụ na ntinye akwụkwọ na-agbalite site na mmalite ruo n'isi. Ndị ụsụụ ndị agha na-enwetakwu njikwa site na ịnakọta data ndị ọbịa, na-eme ka e debanye aha T & C ha, na ịlele NJ. A na-ejikwa ịkwụ ụgwọ na nkwụnye ego na-akpaghị aka site na njikọ 3D echekwara, yana nchekwa nchekwa echekwara ruo elekere 48 mgbe elepụchara. Nwere ike ịmepụta listi ahịa gị, bulie akwụkwọ ndozi gị ma jikọta ezigbo ozi kọntaktị. Ihe ọzọ bụ, ịnwere ike ịme ndị ọbịa gị ka ha gosipụta nhọrọ nnabata ha ma chọọ nhazi nhazi n'emeghị mkpịsị aka gị!
Akpaghị aka Communications
Zeevou na-enye gị ohere idobe ndị otu ọzọ site na email ma ọ bụ SMS n'oge usoro ntinye akwụkwọ. You'll ga-enwe ike ịtọlite ​​ndebiri ndebiri ahaziri, jikọta ya na isi ihe na-akpalite, ma nye ndị na-ehicha gị, VA na ndị na-etinye ego na-achịkwa Zeevou. Profaili zuru ezu na-ahazi ma enwere ike igbochi ya site n'ụdị ọrụ na ihe onwunwe.
Gaa n'ihu - nyefee Zeevou na njikwa ọrụ gị, wee nọdụ ala ma zuru ike. N'ịji aka rụọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ mezie ọgbọ nke ọrụ na ihe omume mgbe niile. Nọgide na-anakọta nchịkọta izu gị kwa izu, nyocha gas nchekwa kwa afọ, ma nye ndị ọrụ ohere ikenye ibe ha ọrụ. Ọ dị mfe na Zeevou.
Streamlined Lelee-na Management
Ga-enwe ike idozi usoro nlele nlele gị site na ịhapụ Zeevou ịhazi ma gosipụta akụkụ niile nke ọbịbịa ndị ọbịa gị. Usoro anyị ga-eziga ntuziaka nyocha onwe onye ozugbo usoro nkwenye ntinye akwụkwọ 5 zuru ezu. Ọ bụrụ na akara akara dị ka nzute & ekele, ị ga-ahụ na ị gaghị egbusi oge site na ichere ndị ọbịa nwere ike igbu oge. Zeevou ga-ezigara onye ọrụ ọ bụla na-elekọta nnabata ahụ ozi na-akpaghị aka, otu elekere tupu oge mbata ọbịa ahụ!
Ndi nlekota oru na ulo
Algọridim dị ike nke Zeevou na-ewepụta ọ bụghị naanị ọrụ nyocha, kamakwa ọ bụrụ na ị na-echekwa ụlọ obibi na oge ịtọ ntọala. N'ụzọ ahụ, ịnwere ike ijide n'aka na ndị ọbịa gị na-anọ ogologo oge na-elezi anya nke ọma, na-enweghị nsogbu ịdebe mgbe emesịrị kpochapụ otu ha. You'll ga-enwe ike ebuli nkesa nke ihe aga-eme na akpaghị aka, nye ndị ọrụ na-achịkwa ohere ịhazi usoro, ma soro ọnọdụ GPS na oge ha na-arụ ọrụ ozugbo ha kụrụ elekere. You'll ga-enwe ike ịlele ogo nke ọcha dị ọcha site na na-arịọ foto site na ngwa ahụ. Ndị na-elekọta ụlọ na ndị ọrụ ndị ọzọ ga-enwe ike ịkọ akụkọ mmezi, ebe ị na-edekọ ọrụ niile, nye ha ndị ọrụ nkwekọrịta, ma soro ọganihu ruo na mkpebi.
Akaụntụ na idozi ego
Anwansi anwughi ebe ahu ... I nwekwara ike idekọ ego na ego gị niile n'ime sistemụ anyị, ma gbakọọ ego gị na ndị ahịa gị ngwa ngwa na ngwa ngwa. Zeevou na-etinye ọnụ na Xero iji rụọ ọrụ ndozi ederede gị ọzọ. Inwe ike ịhazi nkwụghachi ma kwụọ ụgwọ nchekwa na-enweghị ịhapụ Zeevou, yana ịnwe akwụkwọ edemede na-akpaghị aka ma zigara ndị ọbịa pụtara na ị nwere ike belata oge ị na-eji eme ihe ndị a na-eme n'ụwa ma lekwasị anya na ihe dị mkpa.
Ya mere - gini ka ichere?
Hapụ ya na Zeevou, ma lelee azụmahịa gị eto eto.